Waan fedhii ummata:”Artisitin Oromoo kan qabisaha ture Bilisummaa saba satifi malee Dr Abiye keessan wajjini walgahii “maddamar” ta ufi miti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaan fedhii ummata:”Artisitin Oromoo kan qabisaha ture Bilisummaa saba satifi malee Dr Abiye keessan wajjini walgahii “maddamar” ta ufi miti.
Waan fedhii ummata:”Artisitin Oromoo kan qabisaha ture Bilisummaa saba satifi malee Dr Abiye keessan wajjini walgahii “maddamar” ta ufi miti.
Waan fedhii ummata “Artisitin Oromo kan qabisaha ture Bilisummaa saba satifi malee Dr Abiye keessan wajjini walgahii “maddamar” ta ufi miti. Warri walgahii kanarratti hirmaachu baribaadan muraasni maqaa artisitota Oromoo keenya hin balleessiinaa; artistin Oromoo galma isaa nibeeka.” Muluu Baqqalaa
#Hubannoo-“Ammas kaaraa dheeraan akka jiruu dagachuu hin qabnuu. kana kan dagannu taanan ammas garbummaa jarra tokko olii dabalachuuf deemna.Oromoo garbummatti kan garboomsee sirnaa malee nama dhunfaa miti.bilisomuuf immo sirni garboonfata sun barbadaa’uutu irra jira. jijjiraamni sirnaa haga hin dhufneetti.
Ummanni keenya hedduun haala ammaa irratti gaaffii hedduu kaasaa jiru. Keessayyuu, ejjannoon ABO maal akka ta’e beekuuf fedhiin jiru guddaa dha. ABOn akkuma irra deddeebi’ee ibsaa jiru, bifa kamiinuu dantaa Oromoo dabarsee hin kennu. Kaayyoon Oromoo akka milkaa’u jabeessee hojjata. Hiree argamu maratti fayyadamuunis gaaffiin Oromoo akka deebii argatuuf irratti hojjachaa jira.
Ummani Oromoo fi qabsaa’onni Oromoo marti kan beekuu qaban, ABOn ummata Oromoo kan hin leeyyaasifne ta’uu dha. Adeemsi ABO akka milkiin xumuramu, mamiin tokko illee hin jiru. ABOn abdii guddaa qabatee socho’aa jira; waan fedhii ummata keenay miidhu hin fudhatu; waan fedhii ummata keenyaa fayyadu bira hin darbu!!
#ABO #WBO #DantaaOromoo #Oromoo #Oromiyaa
#BuqqaatiiOromoo-“wanni ta’ee naannoo beeniidhaangul gumuzitti naannoo toongootti uummata keenya qotee bulaa qotee jiraatutu shira wayyaanee tiin buqa’e jira. keessumaa hiriira nagaa bahaa jedhaniinii yammuu isaan hiriira bahan booda Sasaasa itti roobsuudhaan ijoollee ganna 12 rasaasan ajjeesuun dubattii guddoo hadha manaa ahimad kumsaa jedhamu jilba rukutanii ysmmuu falfalan ilma isees rukutanii hospitaala begii ciisanii jiru.�walumaa gala namni lama yammuu du’an namni 6 hospitaala ciisanii jira. Kun shira wayyaaneen daangaa oromiyaa ceesistee infestara ishii yammuu qunachiistu. naannoo asoosatti ammoo garee haaromsaa fi gareen abbaayi xaayeen dursamutu walitti bu’anii gareen abbaayi xaayee uummata ijaaratanii uummata bartaa fi maa’oo, faadhaashiitiin Oromoon biyya keessanii isin baasee isin gabrionfachuuf jedha.”
Kaleessa artistootni Oromoo masara mootummaatti aaffeeramuu dhabuun dogongora koree qindeessituu ta’uu Addisu Arega Kitessa